Su'aalaha la isweydiiyo - Tanrimine Metal Support Co., Ltd.
Sidee loo doortaa boolbo nooc ka mid ah dhulka?
Dabeecadda dhulka waa in la qiimeeyaa. Qaybaha jilicsan waxay u baahan yihiin dhererka barroosinka dheer si ay u noqoto mid wax ku ool ah. Dhulka jilicsan ayaa ka dhasha cabbirka daloolka weyn ee cabbirka xoogaa la siinayo (sababtuna tahay xoogaa rattling iyo reaming).
Sida loo cabbiro dhulka?
Dhulka waa in si fiican loo miisaamaa (yacni waa la xannibay) ka hor qodista iyo qarxinta. Dib-u-qiimayn xilliyeed ayaa laga yaabaa in loo baahdo marka la qodayo.
Sida loo doorto awoodda kala duwan iyo awoodda dhalidda ee Bolt?
Astaamaha farsamada ee boolku waa inay ku habboon yihiin xaaladaha dhulka, dhererka boodhka iyo qaabka boodhka. Tijaabooyinka jiidaya waa in la sameeyaa si loo go'aamiyo barkinta bilowga ee boolal isku dhaca.
Sida loo doorto taarikada darajada saxda ah?
Taargooyinka khafiifka ah ama daciifka ah ayaa ku demi doona xiisadda boodhka hoose. Boolbuhu wuxuu kaloo dillaaci karaa saxanka inta lagu jiro rakibidda ama marka la xirayo bool.
Sidee loo helaa xaalad dalool oo wanaagsan ka hor inta aan la gelin boolinta?
Daloolka waa in la nadiifiyaa oo la baaraa si loo hubiyo in suunka guntigu si fiican u gelin doono. Kala duwanaanshaha dhexroorrada daloolka (oo ay ugu wacan tahay xoogagga kala duwan ee dhagaxa dhagaxa ama dhulka oo aad u kala jajaban) ayaa dhalin kara kala duwanaanshaha awooda barkinta ee heerar kala duwan.
Sida loo qodo godka saxda ah Length?
Haddii daloollada aad loo soo qodo aad u gaaban markaas bololku wuxuu ka soo bixi doonaa daloolka saxankana xiriir lama yeelan doono dhagaxa dhagaxa ah. Dhaawaca boolku wuxuu dhalan doonaa haddii la isku dayo in la kaxeeyo bamka in ka badan dhererka godka ayaa oggolaan doona. Daloolku waa inuu ahaadaa mid ka dheer qoto dheer in ka dheer dhererka suunka.
Maxaa dhici doona marka godadka la weyneeyo?
Cabbirka daloolka ee looga baahan yahay suunka isku dhaca ayaa ah qaybta ugu muhiimsan ee rakibidda. Awoodda haysashada boolku waxay ku tiirsan tahay xaqiiqda ah in daloolku ka yar yahay dhexroorka suunka. Daloolka weyn marka loo eego dhexroorka daloolka, waxaa yaraanaya awoodda heysata (ugu yaraan markii hore) Daloollada waaweyn waxaa sababi kara iyadoo la adeegsanayo cabbirka xoogaa khaldan, taasoo ka dhigaysa in layliga socdo inta uu daadinaayo daloolka, dhulka jilicsan (ciladaha, gouge, iwm. .) iyo bir qaloocsan.
Maxaa dhici doona marka godadka hoos loo dhigo?
Haddii cabbirka daloolku uu aad u yar yahay marka loo eego cabbirka isku dhaca markaa aad bay u adkaan doontaa in la rakibo bamka. Suunka ayaa waxyeello gaari kara marka la rakibo. Daloollada aan cabbirka badnayn waxaa sababa qaniinyo duugoobay iyo/ama cabbir qaniinyo khaldan oo la isticmaalay. Haddii birta isku dhafan loo adeegsado joojiye ama jaakad, dhexroorka daloolka ayaa hoos u dhacaya markasta oo birta la beddelo (dhaqanka caadiga ah wuxuu u baahan yahay qashin yar in loo isticmaalo sida mid ka qoditaanka qoto dheer godka). Markasta oo la dhimo dhexroorka daloolka awoodda barroosinka ayaa kordha. Birta isku dhafan badanaa waxay keentaa godad qalloocan waana in laga fogaadaa mar kasta oo ay suurtogal tahay.
Sida loo xakameeyo Times drive?
5 -ama 6 -lugood oo ah boodhka isku dhaca, joogsiga ama jackleg ayaa ku riixaya daloolka godka 8 ilaa 15 ilbidhiqsi. Wakhtiga wadistaani wuxuu u dhigmaa barroosinka hore ee habboon ee dejiyeyaasha. Wakhtiyada baabuur -wadista degdegga ahi waa inay u noqdaan digniin in cabbirka daloolku aad u weyn yahay sidaas darteedna xidhitaanka hore ee boolku aad u hooseeyo. Waqtiyada kaxaynta dheer waxay muujinayaan cabbirrada godadka yar yar oo laga yaabo inay sababeen xirashada xoogaa.
Sida loo doorto xoogaa?
Xadhkaha badhanka ayaa sida caadiga ah ilaa 2.5mm ka weyn cabbirka la gooyay. Badhanka 37mm ayaa laga yaabaa inuu dhab ahaantii ahaado 39.5mm dhexroor marka cusub. Tani waa mid aad u weyn oo loogu talagalay isku dhaca 39mm. Si kastaba ha ahaatee, badhamada badhamadu si dhakhso ah ayay u xirtaan, si kastaba ha ahaatee, waxay kordhinayaan awoodda barroosinka iyo kordhinta waqtiyada wadista. Dhinacyada iskutallaabta ama "X", dhinaca kale, waxay u eg yihiin runta cabbirka shaabadaysan badiyaa gudaha 0.8mm. Waxay si fiican u haystaan ​​cabbirkooda laakiin waxay u muuqdaan inay si qoto dheer u qodanayaan qaniinyada badhanka. Waxay ka doorbidaan badhamada badhanka si loogu rakibo khilaaf halka ay suurtogal tahay.
Waa maxay sababta rakibidda dadban ay u tahay qodob muhiim ah?
Muraayadaha waa in lagu rakibaa meel u dhow si toos ah dusha dhagaxa sida ugu macquulsan. Tani waxay xaqiijineysaa in giraanta alxanka ahi ay taabato saxanka oo dhan. Muraayadaha aan ku dhegganayn saxanka iyo dhagaxa dhagaxa ayaa keeni doona in giraanta lagu xiro meel sababi karta fashilka hore. Si ka duwan sida boorarka dhagaxa kale, dhaqayaasha kursiga goobaabinta ah lama heli karo si loo saxo xagal -daacinta leh dejiyeyaasha isku dhaca.
Sida loo doorto qalabka darawalka rakibaadda?
Qalabka darawalku waa inuu ku wareejiyaa tamarta durugsan bamka inta la rakibayo, maaha tamarta wareegga. Tani waa mid ka soo horjeeda inta badan noocyada kale ee taageerada dhulka. Dhamaadka shank ee darawalka waa in uu ahaadaa dhererka habboon si loola xiriiro bistoolaha daloolinta ee ku -joogsadayaasha iyo lugaha (ie. Dhamaadka shank ee darawalada ayaa wareegsan si aan loogu mashquulin wareegga layliga. Aaladaha darawalku waa inay lahaadaan qaabka dhammaadka habboon si ay ugu habboonaadaan is -qabqabsiga iyadoon la xidhin oo dhaawac u geysan kara dhagaxa inta la rakibayo.
Sidee muhiim u tahay waxbarashada?
Waxbarashada habboon ee shaqaalaha macdanta iyo kormeerayaasha waa khasab. Maaddaama beddelidda awoodda shaqaaluhu ay aad ugu badan tahay shaqaalaha wax dhisaya, waxbarashadu waa inay noqotaa mid joogto ah. Shaqaale xog -ogaal ah ayaa lacag badbaadin doona mustaqbalka fog.
Sidee bay muhiim u tahay la socodka?
Rakibaadda waa in lala socdaa si loo hubiyo in hababka habboon iyo tayada la ilaaliyo. Cabbiraadaha tijaabinta jiidista waa in si joogto ah loogu sameeyaa dejiyeyaasha xallinta si loo hubiyo qiyamka bilowga hore.